“အနုပညာ ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ သွားရောက်နေထိုင်ရတော့မယ့် ဦးဝင်းနိုင်(အနုပညာ)”
အနုပညာလောကမှာ တစ်ခါက ပရိသတ်တွေရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် ဟာဒယရွှင်ဆေးတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းနိုင်ကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့တာ ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ဦးဝင်းနိုင်တစ်ယောက်ကိုမတွေရတော့တာကတော့ ဦးဝင်းနိုင်ဟာ လေဖြတ်ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတာကြောင့် ရုပ်ရှင်တွေမရိုက်ကူးနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ ဦးဝင်းနိုင်ဟာ အဲ့ဒီရောဂါဝေဒနာကြောင့်ပဲ မိသားစုနဲ့ခွဲကာ အနုပညာဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ သွားရောက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိပ်သာမှာ ရုပ်ရှင်လောကကအသိမိတ်ဆွေတွေရှိတာကတစ်ကြောင်း၊ […]
အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆နှစ်ပြည့်မှာ ချစ်ဇနီးကို သွားခိုးတုန်းက အတွေ့အကြုံလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Rဇာနည်
October 28, 2019 Thuta Star 0
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်Rဇာနည်ကတော့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေးရယ်၊ သားချောလေးနှစ်ယောက်ရယ်နဲ့အတူပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ Rဇာနည်က အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆နှစ်ပြည့်မှာ ချစ်ဇနီးကို သွားခိုးတုန်းက ကြည်နူးစရာ အတွေ့အကြုံလေးကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ၁၆နှစ်တိတိ လက်တွဲခဲ့တာတောင် အကြင်နာတွေ အချစ်တွေ […]
ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်များကို Facebook သုံးရင် Comment တွေ မဖတ်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပီ
Myanmar Idol Season3ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သူ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများစွာ ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် မကြာခင်မှာ လာတော့မယ့် Season4မှ ပြိုင်ပွဲဝင်အသစ်များကို ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေစဉ်အတွင်း Facebook သုံးခဲ့ရင် Comment များကို မဖတ်ဖို့အတွက် အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။“အဓိကကတော့ Facebook […]
ဒီနေ့ Model Academy ကနေ နှုတ်ဆက်အိမ်ပြန်ရမယ့်သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ??
October 27, 2019 Thuta Star 0
ဒီနေ့ Model Academy ကနေ နှုတ်ဆက်အိမ်ပြန်ရမယ့်သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?? လတ်တလော ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှု အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေတဲ့ TV Program တစ်ခုကတော့ ဝါသနာရှင်လူငယ်လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကို ပုံဖော်ပေးနေတဲ့ The Model Academy Season3အစီစဉ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ […]
သူ့နှလုံးသားထဲက ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက်ကိုတရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
ကလေးလေး တယောက်လို အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး ဖွေးဖွေး ကတော့ သူ့အနေနဲ့ အမြဲတမ်းလိုလို ပျော်ရွှင်နေတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေဆီကနေ အားပေးမှု အပြည့်အဝ ရရှိထားပြီးသား မင်းသမီး တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ် ချစ်ခင်မှုကို အများကြီးရထားပေမယ့်လည်း လက်ရှိချိန်ထိတော့ Single တယောက်အနေနဲ့ပဲ […]
မြန်မာပြည်သိန်းတန် တို့ဇနီးမောင်နှံကို သွားရောက် ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
Myanmar Idol season 3ရဲ့ winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာဆိုရင် ပရိတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုရှင် တစ်ဦးပါ။ ဖြိုးမြတ်အောင်က ခုဆိုရင်အနုပညာလမ်းကြောင်းကို ပုံမှန်လေး လျှောက်လှမ်းနေပြီး သီချင်းလေးတွေဆို ကြော်ငြာလေးတွေလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် က myanmar idol မှ ပြိုင်ပွဲဝင် […]